Arday Ka Timid Baraawe oo Muqdisho Ku Galaya Imtixaanka Shahaadiga ah – Goobjoog News
in Banaadir, Education news, Gobalada, K/Galbeed, Wararka Dalka
Wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka jawaabtay cabashada arday aan gelin imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare, kuwaas oo ku sugnaa degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha hoose.
Diyaarad ayaa aradayda ka soo qaaday garoonka diyaaradaha Baraawe, waxaana loo qaaday dhanka magaalada Muqduisho, si ay imtixaanka uga qeeyb galaan, oo ardayda ay ku jiraan maalintii 2-aad , oo shalay la daah furay.
Shalay ayaa waxaa baraha bulshada qabsaday muuqaalka arday kamid ah araday ku sugan Baraawe, kaas oo sheegay in lagu war geliyey in imtixaanka ay ku galayaan magaalada Marko balse aysan suurto gelin arrintaas.
Ardayda ayaana ugu baaqay madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ayay in ay ka caawiyaan oo ay ka qeyb qaataan sidii ay uga qeyb geli lahaayeen Imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare.
Farmaajo iyo Madoobe oo Kulmaya